eNasha.com - पूर्व मिस हङकङ नेपाल बिहे गर्न नेपालमा
पूर्व मिस हङकङ नेपाल बिहे गर्न नेपालमा
सन् २००० मा मिस हङकङ नेपाल बनेकी ममिता गुरुङ साढे चार वर्षलामो प्रेमजीवनपछि वैवाहिक जीवनमा बाँधिने भएकी छिन् । उनले हङकङ निवासी प्रथम मिस्टर हङकङ नेपाल (१९९८) रोशन लिम्बुसँग आउँदो महिना लगनगाँठो बाँध्ने भएकी हुन् ।
सात वर्षअघि मिस हङकङ नेपाल घोषित भएर पनि अझैसम्म नेपाली कला, संस्कृति, विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुँदै आएकी ममिताले हङकङमा ट्यालेन्ट हण्ट मेगा मोडेल कन्टेस्ट नामक कार्यक्रम हरेक वर्षसञ्चालन गरिरहेकी छिन् । पहिले सांस्कृतिक नृत्यमा निकै नाम कमाइसकेकी ममिता हङकङमा आयोजन गरिने अधिकांश सांस्कृतिक तथा नृत्यपरक कार्यक्रमको नृत्य निर्देशकका रुपमा कार्यरत छिन् ।
उनलाई इनशाडटकमले राजधानीको दरबारमार्गस्थित अन्नपूर्ण क्याफेमा एक साँझ फेला पार्दा भएको रोचक कुराकानीका केही अंश-
तपाइँ त निकै मोटाउनु पो भएछ ? (मानौँ उहाँको मोटाइका कारण मलाई नै अप्ठेरो पो परेको हो कि झैँ गरी मैले सोधेँ ।)
हो र ? खासमा सन्तुष्टी धेरै भएर होला । (रोशन लिम्बु, जो उनको लामो समयदेखिको प्रेमी पनि हुन्, लाई देखाउँदै) उहाँलाई पाएपछि मैले सुख र सन्तुष्टी धेरै पाएर त होला नि ! (यसपछि उनले रोशनतिर हाँस्दै हेरिन्, रोशन हट्टाकट्टा, कम बोल्ने, मुसुक्क मुस्काए ।)
एक वर्षका लागि मात्र मिस हङकङ हुँदा र अर्को वर्षअरु नै कोही केटीले 'टाइटल' खोसिदिँदा चित्त दुख्दैन ? (मलाई सधैँभरि जिज्ञाशा लागिरहने कुरा प्वाक्क ममितालाई सोधिहालेँ ।)
त्यस्तो मलाई चाहिँ भएन । किनभने, मलाई थाहा थियो- म एक वर्षका लागि मात्र 'टाइटल' पाउन सक्छु, सधैँभरि होइन । त्यसैले मानसिक रुपमा अर्को वर्षअरु नै कोहीलाई मेरो 'क्राउन' हस्तान्तरण गर्न म तयार थिएँ । अँ यो कुरा चाहिँ सही हो कि मिस हङकङ नेपाल भइसकेपछि एउटी साधारण केटीले जुन 'होराइजन' देख्ने र महसूस गर्ने अवसर पाउँछे, एक वर्षको अवधि चाँडै बितेजस्तो लाग्छ । अझै दुइ वर्षजति त्यही 'टाइटल' र त्यस्तै अवसर पाइए झन् जान्ने, बुझ्ने र सिक्ने अवसर पाइन्थ्यो कि, जस्तो महसूस हुन्छ ।
धेरै पूर्व मिस एचके-नेपालहरुको चर्चा छैन, तर तपाइँ त बरोबर चर्चामा आइरहनु हुन्छ, हङकङका सांस्कृतिक र नृत्यपरक कार्यक्रममा त तपाइँ अनिवार्य नै हुनुहुन्छ रे नि ? (मैले सुनेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहेकाले यही सोधिदिएँ ।)
अरुको कुरा त थाहा छैन, तर म चाहिँ नृत्य र सामाजिक कार्य भनेपछि हुरुक्क हुन्थेँ । त्यही भएर मैले संस्कृतिमा आधारित ग्ल्यामर क्षेत्र नै रोजेँ । आज अधिकांश कार्यक्रममा मेरै 'कोरियोग्राफी' हुने गरेको छ । खासमा भन्ने हो भने जतिसुकै अप्ठेरो र उपलब्धिहीन भए पनि यी काम गर्न ज्यादै रमाइलो लाग्छ । अझ मैले रोशनजीजस्तो सहयोगी पार्टनर पाएकी छु, जसले सल्लाह, सुझाव र हरदम सहयोग गरिरहनु हुन्छ । त्यही भएर म यही क्षेत्रमा टिकिरहेकी छु ।
तपाइँले मिस एचके नेपालमा भाग लिनेबारे चाहिँ कसरी सोच्नु भयो ? (नेपालकी प्रख्यात रेडियो प्रस्तोता कला सुब्बाकी बालसखी ममिताको मोडलिङ रुचिबारे जान्ने इच्छा लागेर यो पनि सोधेँ ।)
म त नेपालमै हुँदा मिस नेपालमा भाग लिन्छु भनेर सोचिरहेकी थिएँ । जुन बेला कला (सुब्बा)ले मिस नेपालमा भाग लिएकी थिई, (साथी भएकीले कलालाई तँ सम्बोधन गरेकोमा मलाई आश्चर्य लागिरहेको थिएन) मलाई पनि मिस नेपालमा भाग लिन मन लागेको थियो । तर त्यतिबेलै हङकङ जानु पर्ने भएकाले यहाँ भाग लिन पाएकी थिइनँ । तर जब सन् २००० मा मिस हङकङ नेपाल आयोजन हुने थाहा पाएँ, मैले तत्काल भाग लिइहालेँ ।
मिस हङकङ नेपाल भइएला भन्ने सोच्नु भएको थियो त ? (प्रायः सफलता अचानक हात पर्छ भन्ने एउटा कथनलाई सम्झिँदै उनको सफलताको कथा जान्न चाहेँ मैले ।)
कस्तो भयो भने, मैले दुइ वटा टाइटल जितेकी थिएँ, मिस फोटोजेनिक र बेस्ट ड्रेस । अरु केही पाइएन भने पनि केही न केही त पाएँ भन्ने लागिरहेको थियो । तर मैले जसरी मिहिनेत गरेकी थिएँ, त्यति दुइ वटा टाइटलमा मात्र सीमित हुन्न होला भन्ने चाहिँ लागेको थियो । त्यसैले पछि मिस हङकङ नेपाल घोषित हुँदा मिहिनेतको फल मीठो हुन्छ भन्ने कथन ठीकै हो जस्तो लाग्यो ।
तपाइँ त रोशनजीसँग नेपाल आउनु भएछ, किन नि ? (नेपाल भ्रमणको रहस्य मैले खोतल्न चाहेँ ।)
उहाँसँगको साढे चार वर्षको प्रेमपछि अब बिहे गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामी दुवै नेपाल आएका छौँ । यो भ्रमण निजी र वैवाहिक भ्रमण हुनेछ ।
हङकङमा हुँदा नेपालको के कुरा 'मिस' गर्नुहुन्छ ? (मलाई ज्यादै जान्न लागेको कुरा चाहिँ यही थियो ।)
यहाँको 'केयर फ्री' समय । त्यहाँ त यहाँको 'केयर फ्री' हुन सकिँदैन । हरेक कुराको पर्फेक्ट टाइम हुन्छ र यदि एउटा काम मिस भयो भने धेरै घाटा हुन्छ । त्यहाँ काम नगरी खान पाइँदैन र यहाँ त काम नगरी पनि महिनौँ खान पुग्छ ।
अनि, नेपालमा हुँदा त्यहाँको के कुरा मिस गर्नुहुन्छ ?
अब त्यहाँ चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरु भइबस्छ । ती कार्यक्रममा आफूले गर्ने भूमिका छुट्यो भनेर लोभ लाग्छ । (यसपछि उनको चिरपरिचित मुस्कान अनुहारमा छाउँछ । जुन देख्दा उनले सन् २००० मा मिस फोटोजेनिक त्यसै पाएकी होइन रहिछन् भन्ने लाग्छ ।)
अब बिहेपछि हङकङ फर्किनु हुन्छ, त्यसपछि आफ्नो काम त्यहाँ जारी राख्नु होला । तर तपाइँलाई भित्रैदेखि गर्न इच्छा भएको कुनै काम ?
अँ, मिस हङकङ नेपाललाई मिस नेपालमा सहभागी गराउने चाहना ज्यादै तीव्र छ मलाई । जुन कुरा मैले मिस गरेँ, भोलिको समयमा हाम्रा नेपाली हङकङबासी नयाँ पुस्ताले मिस नगरुन् भन्ने इच्छा । (वाह ! क्या बात् !!)
तपाइँहरु त्यहाँ सीमित व्यक्तिहरुमाझ किन मिस हङकङ नेपाल गरिरहनु भएको छ ? किन त्यहाँको स्थानीय मिस हङकङमा सहभागी गराउनु हुन्न ? (हङकङबासी भएकाले हङकङकै स्थानीय सौर्न्दर्य प्रतियोगितामा लड्नु पो पर्छ भन्ने मलाई लागेकाले यो प्रश्न पनि सोधिहालेँ ।)
एक त हामी नेपाली हौँ, हाम्रो आफ्नै संस्कार र संस्कृति छ, मूल्य र मान्यता छन् । ती कुरा नयाँ पुस्तालाई सिकाउन र समय परिस्थितिअनुसार ढल्न यो कार्यक्रम गरेका हौँ । हामी जति नेपाली हुनुमा गर्व गर्र्छौँ, मिस हङकङमा भाग लिएर त्यो गर्व गुमाउँछौँ । यो एउटा पक्ष भयो । अनि अर्को पक्ष चाहिँ, मिस हङकङ हुनका लागि त्यहाँको स्थानीय क्यान्टोनिज भाषा जानेको हुनुपर्‍यो र त्यहाँ अनेक किसिमका अन्य समस्याहरु पनि छन् । जसका कारणले हामीले चाहेर पनि त्यहाँ सहभागी हुन सक्तैनौँ र त्यहाँ भाग लिएर हाम्रो नेपाल र नेपाली संस्कृति चिनाउने उद्देश्य पनि सफल हुँदैन । त्यसैले त्यतातिर हामीले सोचेका छैनौँ ।
उसो भए मिस हङकङ नेपालजस्तो वा तपाइँले नै सञ्चालन गर्नु भएको मेगा मोडल ट्यालेन्ट शोको सुदूर भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ ?
राम्रो । हामीले एउटा परम्परा बसाउने हो र नयाँ पुस्ताले यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने लाग्छ । त्यहाँ पनि मोडलिङको क्षेत्र मैले सुखद् देखेकी छु ।
सेलेब्रिटी माओवादी संविधानसभा हल्ला मोबाईल awards hi-life streets पेट्रोल crisis अनुभव समलिङगी celebrity festival events